Video-render နှင့် Nokia9၏ပုံရိပ်အသစ်များပေါ်လာသည် Androidsis
၏ထိုကဲ့သို့သောအပြုသဘောပစ်လွှတ်ပြီးနောက် Nokia X7 (Nokia 7.1)တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကျင်းပခဲ့သည်။ HMD Global သည်ယခုအချိန်တွင် Nokia အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ချိတ်ဆက်နေပုံရသည်။ ဒီ 'လိပ်စာ' ဟာသူတို့ရဲ့နောက်တန်းအလံလွှင့်ထုတ်မှုနဲ့အတူဆက်သွားမှာသေချာပါတယ် Nokia က 9၎င်းကို Nokia9Pureview ဟုခေါ်တွင်နိုင်သည်။
အရင်တုန်းကဖုန်းမှာအကြံဥာဏ်ရှိတယ်၊ ရှေ့ပြေးပုံစံအဆင့်ဆင့်။ သို့သော်ယခု @OnLeaks နှင့် 91Mobiles မှပေါက်ကြားမှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ device ကိုစားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ခဲ့နိုင်သည့်အရာကိုကြည့်နေကြသည်တစ်ချိန်ကကုမ္ပဏီက၎င်းကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
Nokia9မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ 18:9မျက်နှာပြင် - ၎င်းမှာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း - ၎င်း၏ချောချောမွေ့မွေ့သောကိုယ်ထည်နှင့်သတ္တုဘောင်သည်လာမည့်အထင်ကရနေရာနှင့်တူညီနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိခဲ့သည့်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုအသစ်အရသိရသည်။ သို့သော်၎င်း၏ဒီဇိုင်းတွင်ထူးခြားချက်တစ်ခုမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်၎င်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သေချာသည်။ Selfie ကင်မရာသည်လက်ဝဲဘက်အောက်ပိုင်း၌ထိုးဖောက်ခံထားရသော Nokia logo နှင့်အတူထိုင်နေသည်။
နောက်ကျောဘက်မှာ Nokia9သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းခုနစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့အနက်ငါးခုသည်ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ၏အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည် အထူးသဖြင့်တစ်ခုမှာ dual-ton LED flash ကိုရိုးရှင်းစွာဖုံးကွယ်ထားလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခုသည်အနီးကပ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် dual အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမသေချာပါ။
ဒါဟာကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် HMD Global နှင့် Nokia သည် PureView တံဆိပ်ကိုဤစက်ဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းချမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအလားအလာရှိသောကင်မရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရနိုင်ရန်အခွင့်အရေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ထိုမှန်ဘီလူးများအားလုံးတွင် Zeiss အမှတ်တံဆိပ်ပါရှိသည်။ ဓာတ်ပုံအပိုင်းရှိအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
ဒီလက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၊ အဲဒီဖန်သားပြင်ကို notches မပါဘဲပြောမယ် QHD + resolution ဖော်ပြပြီးသော 5.9: 18 ရှုထောင့်အချိုးအစားကို အခြေခံ၍ ၅.၉ လက်မအရှည်။ ဒီတစ်ခုမှာအောက်ခြေမှာအနည်းငယ်ကြီးမားတဲ့မေးစေ့ရှိပေမယ့်သာမန် Nokia logo မပါရှိပါဘူး။ အဲဒီအစား၊ ဒီဟာညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရဲ့ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတယ်။
Nokia9၏အရွယ်အစားမှာ ၁၅၅ x ၇၅ x ၇.၉mm ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ဗွေရာကိုဖတ်ရန်နေရာသို့မဟုတ်ရှေ့၌နေရာမရှိ၊ ၎င်းကိုညွှန်ပြသည် Nokia9တွင်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ရှိနိုင်သည်ဒါကြောင့်ကောလဟာလသတင်းများအရသိရသည်။ ဖုန်းသည်မျက်နှာ၏သော့ဖွင့်ခြင်းကိုအထောက်အပံ့ပြုမပေးကိုမူမသိရသေးပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားသောကြောင့်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminal တစ်ခုဖြစ်သော high-performance terminal ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရသေးပါ။
နှစ်ဖက်လုံးတွင်ညာဘက်ရှိအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်တစ်ခုနှင့်အိပ်စက်ခြင်း / နှိုးခြင်းခလုတ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် input hardware မရှိပါ။ အပေါ်ဘက်တွင် SIM ကဒ်အကွက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အောက်ဘက်တွင် USB Type-C အားသွင်းသည့် port ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ များစွာသောလူများအတွက် ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်ပုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
အတွင်းပိုင်း, Nokia9ကို Snapdragon 845 chipset ကစွမ်းဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် Snapdragon 855. အကြောင်းအရင်းကတော့ 8GB RAM၊ 128GB Internal Storage, ကြီးမားတဲ့ 4,150mAh Capacity Battery ပါရှိမယ်ဆိုတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ပေါင်အဘို့အပေါင်, အစီရင်ခံသတ်မှတ်ချက်များနှုန်း, ဒီစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင် Google Pixel 3ရှေ့နှင့်နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်သောအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ Terminal နှစ်ခုမှာနောက်ကင်မရာနဲ့ရှေ့ကင်မရာသာရှိတာကိုမီးမောင်းထိုးပြကြပါစို့။
စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုတို့ကိုမသိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစိတ်ထဲထည့်ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်စျေးသိပ်မကြီးသောစျေးနှုန်းဖြင့်သာရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ဈေးအကြီးဆုံး Nokia ဖုန်းကိုငါတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » နောက်ခံကင်မရာငါးခုပါသည့် Nokia9၏ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးမှုနှင့်ပုံရိပ်အသစ်များပေါ်လာသည်